မေရီကို| January 22, 2013 | Hits:52,196
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment myo chit thu January 22, 2013 - 5:06 pm	Public ပဲလုပ်လုပ် Private လုပ်လုပ် နိုင်ငံတကာနဲ.ချိတ်ဆက်ပြီးပဲလုပ်လုပ် Manager များရဲ. အရည်ချင်း အမူအကျင့် ကောင်းတွေမရှိလို.ကတော့ အတူတူပဲ ဘာဖြစ်လိုပြောရတာလဲဆိုတော့ (Post Paid Phone အတွက် AGD Bank မှာ Account သွားဖွင့်တယ် ကျပ်ငွေ Account ကတော့ အဆင်ပြေပါတယ် FEC Account အတွက် Currency Conversion လုပ်မယ်ပြောတော့ ကမာရွက် ဘဏ်ခွဲမှာပဲရမယ် ဆရာစံဘဏ်ခွဲမှာ မရဘူးတဲ့ ကယ်ဒီတော့ FE Bank မှာလုပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုဖုန်းဆက်ပြီး FEC ၀ယ်ရတာပေါ့ ၀ယ်ပြီး Deposit သွားလုပ်တော့ အဲဒီအထည်က FEC 10 တရွက် ဆေးစွန်းနေတယ် လက်မခဲနိုင်ဘူးတဲ့) စိတ်လဲဆိုးဆိုးနဲ. ပြောပြီး ” သုံးဖို.ထုတ်ထားတဲ့ ငွေလာ သိမ်ဖို.ထုတ်ထားတဲ့ငွေလာ သုံးဖို.ထုတ်တာဆိုရင် ဟောင်နွမ်းမယ် ညစ်ပေးမယ် စွန်ထင်မယ် ဒါတွေကို ငွေသုံးစွဲတဲ့သူတိုင်သိတယ် ဘဏ်လုပ်ပြီး ငွေအသစ်မှလက်ခံရမယ် လို. အထက်ကညွှန်ကြာထားရင် ဘဏ်အလုပ်လုပ်မနေ ညွှန်ကြာချက်မရှိရင်လဲ Manager တွေ ခြေခံကြတဲ့ လည်ပတ်သုံးစွဲငွေရဲ. သဘောတရားကို မသိရင် Manager လုပ်မနေကြနဲ. လက်မခံန်ုင် FEC 10 ကိုလဲ လက်မခံနိုင်ကြောင်းစာထုတ်ပေး အခွန်ဘဏ်ဏာ ၀န်းကြီးထံသွားမယ်လို.။ Bill တွေအပေါ်စီပွားရှာချင်လဲ ကောင်ကောင်ရှာစားကြ ပြည်သူတွေကို စိတ်ညစ်အောင်တော့ မလုပ်နဲ.” အယ်ဒီတော့မှ အချင်ချင်ဘာတွေ ပြောနေကြလဲမသိဘူး ခဏနေတော့ လက်ခံထားလိုက်ပါပြီလို.ပြောပြီး Deposit Slip ကိုလဲထုတ်ပေးလိုက်တယ်
NLD ဦးဥာဏ်ဝင်း ခရီးစဉ်နှင့် ဂျပန် အကျိုးစီးပွား